छ वर्षसम्म पनि बन्न सकेन मुडे-चरिकोट सडक : कहाँ गयो ७९ करोड ? – tshorolpa
Home/देश प्रेमी/छ वर्षसम्म पनि बन्न सकेन मुडे-चरिकोट सडक : कहाँ गयो ७९ करोड ?
देश प्रेमीमुख्य समाचारराजनितीसमाचारसम्पादकीय
जनताको ॲाखामा छारो हाल्न बन्द गर्नुस हामिलाई सडकको धुलो नै काफि छ
News २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार १६:४०
कात्तिक,२६ काठमाडौं। सेटिङमा चलेको मेरो देशको राजनिति अनि बिकास निर्माणका काममा भयको भ्रष्टाचार, बेथिति ढिलासुस्ति अनियमितता र सेटिङले अत्यन्तै दिक्कलाग्दो र घिनलाग्दो बनेको छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो लामोसॅाघु जिरी सडक खण्ड अन्तर्गतको मुडे चरीकोट ३० कि मि सडक खण्ड।
२ बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७२ साल भदौमा ठेक्का लागेको सडक ६बर्ष बितिसक्दा पनि बन्न सकेन । जसको कारण जनताले सास्ति ब्यहोर्नु परेको छ। हिमालि जिल्ला दोलखाको मुख्य सडकको दुराबस्थाको कारण जटिल प्रकारका बिरामिलाई समेत समयमै हस्पिटल पुर्याउन सकिदैन ।
दोलखा जिल्लाका बिभिन्न ब्यबसायहरु धरासायी बन्दै गयका छन।आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिनेको संख्यामा समेत कमि आयको छ। पर्यटन तथा होटल ब्यवसाय खस्किदै गयको छ । जनता जोखिम मोलेर यात्रा गर्न विबस छन । बाटो कै कारण धेरैपटक सवारी दुर्घटना समेत भैसकेको छ ।
सडकबाट उडेको धुलो सडक छेउछाउका सर्वसाधारणका आवासीय घरका साथै व्यापारिक सटरमा पस्दा सम्बन्धितलाई निकै हैरानी हुने गरेको छ। “धुलो बसेको घरका बरण्डा, छत,झ्याल ढोका दिनभरिमा आठ÷दश पटक सरसफाइ गर्नुपर्ने दिनचर्या बनेको छ”,
विकास गर्दा केही अप्ठ्यारो हुनु स्वभाविक भएको तर निर्माणको काममा छ सात साल लागएर ढिलासुस्ती हुँदा जनताले लामो समयसम्म दुःख पाइरहेको छन्।काम गर्न कति समय लाग्ने, कुनै मापन नै हुन नसक्दा लामोसॅाघु जिरी सडक खण्ड अन्तर्गतको मुडे चरीकोट ३० कि मि सडक खण्डअनिश्चितता भयो।
समयमै सडक निर्माण सम्पन्न नभयको बिषयमा स्थानिय वासि र ब्यबसायि हरुले संघर्ष समिति नै बनायर आन्दोलन समेत गरेका थिय ।तर पनि निर्माण कम्पनि ले अझै सम्म कुनै चासो देखायको छैन । नागरिकको चर्को आन्दोलन पछि केहि दिन काम गरे जस्तो गरेको निर्माण कम्पनिले फेरीपनि झुक्यायको छ ।
पटक पटक सडक सुधारका लागि अनुरोध गरेपनि निर्माण कम्पनिले बिभिन्न बाहाना बनायर पन्छिन खोजिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मुडे देखि दोलखाको चरीकोट सम्मको ३० किमि सडक २ बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ७९ करोड रुपैया २०७२ भदौमा भारतिय ठेकेदार कम्पनि साकिला हेदर , नेपालि कम्पनि शंकरमालि र सुनौला खिम्ति निर्माण सेवा गरी ३ कम्पनिले ठेक्का पायका थिए।
३ ओटै कम्पनिको जोइन्ट भेन्चर ठेक्काको मुख्य ठेकेदार कम्पनि काठमान्डौको शंकरमालि र त्यसका संचालक दिपक साप्कोटा हुन । केहि प्रतिसत काम गरिसकेपछि ठेकेदार दिपक साप्कोटा फरार भयका थिए।
त्यसपछि निर्माणको काम अलपत्र अबस्थामा छ।पटक पटक गरेर ४ पटक म्याद थप गरीयो तर पनि काम संचालन भयन अन्तिम पटकको म्याद पनि २०७८ असारमै सकिसकेको छ।
दिपक साप्कोटा फरार भयपछि शंकरमालि कम्पनिका अर्का ठेकेदार दानबहादुर कार्कि ले मिडियामा बोल्दै भनेकाछन कि मिटर ब्याजको पैसाकै कारण टाट पल्टियर दिपक साप्कोटा फरार भयकाहुन उनिमाथि अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ ।
यो ठेक्का मा तत्कालिन सरकारका माओवादिबाट खेलकुद मन्त्री दावा.लामा र बालकृष्ण तिम्मिल्सिना को ४० प्रतिसत सेयर रहेको बुझियको छ।
२ लेनको सडक बनायर पिच गरि सम्पन्न गर्ने गरि ठेक्का ठेकेदार कम्पनि साकिला हेदर ,शंकरमालि र सुनौला खिम्ति कम्पनिका मालिक हरु नै झगडा गर्दै एक आपसमा घिनलाग्दो खेल खेलेर बसेका कारण आजसम्म लामोसॅाघु जिरी सडक खण्ड अन्तर्गतको मुडे चरीकोट ३० कि मि सडक खण्ड बाटो अलपत्र अबस्थामा छ ।
सॅाढेहरुको जुधाई चलेको छ दोलखालि जनताले सास्ति व्यहोर्नु परेको छ । बाटो निमार्ण गर्नका लागि खनेर मात्र छोडिदिएका कारण कतिपय स्थानहरुमा पहिरो झरेर बाटो झन सांघुरो र एकदमै अफ्टेरो भयको छ ।
हिउदमा अत्याधिक धुलो र बर्षायाममा हिलाम्मे सडकमा अत्यन्तै जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु परेको छ । बारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका छन। यस्तो अवस्था समेत लामोसॅाघु जिरी सडक सुधार आयोजना मौन छ ,भौतिक पूर्वाधारतथा यातायात मन्त्रालय चुपचाप छ ।
सडक बिभाग के हेरेर बसेको छ थाहा छैन ।सम्बन्धित निकायलाई मेरो प्रश्न छ। ४/४ पटक सम्म यस्ता फटाहा ठेकेदार हरुलाई कुन नियत ले म्याद थप गरेको ? समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनिको शंझौता रद्द गरेर किन कारबाहि गर्न नसकेको ? कसले रोकेको छ ? यस भित्र को खेल के हो ?
हाम्रो सरकारी निकायको अनुगमन हेर्ने हो भने आखामा छारो हाल्ने, झारा टार्ने खाल्को हुन्छ । सरकारी कर्मचारी नै घुष र कमिसनको चक्करमा लागेका हुन्छन । यस्तै हर्कत हरुले बिकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परिरहेका छन । हाम्रा जन प्रतिनिधिहरु कुन दुलोमा लुकेका छन पत्तो छैन,भाषण गर्नेबेलामा बाहिर निस्किन्छन अनि बिकास र संमृद्धीका हावादारी भाषण गरेरै समय बर्वाद गर्छन ।
हामि एक्काइसौ सताब्दिका अग्रगामि परीवर्तनका शक्ति हौ भन्दै कुर्लिन्छन ।जनताको अवस्था कस्तो छ विकास निर्माण का काम के के भय भयन कसैलाई मतलव छैन ।
नेता ज्यूलाई मेरो एउटा अनुरोध छ – ” ब्यवस्थापनि फेरीयो तर जनताको अवस्था कहिलेपनि फेरीयन । यहि क्षेत्रका जनताको भोट लिएर कोहि मेयर भय कोहि सांसद भय कोहि मन्त्री समेत भय ए नेता ज्यू तपाईहरुको घर फेरीयो ,गाडि फेरीयो , तलब भत्ता सेवासुबिधा बढेको बढ्यै छ , जिवन सैलि फेरीयो तर जनता हिड्नेबाटो कहिलेई फेरीयन , आम नागरीकको जिवनस्तर कहिलेई फेरीयन । आखिर राजनिति के का लागि थियो ? अब तपाईहरु कहिले बिस्थापित हुने ? अब त अति भो , अब त लाज पनि लजाइ सक्यो , यस्ता हावादारी को खोक्रा भाषण बन्द गर्नुस । जब सम्म हाम्रो समाजको सबै भन्दा ठुलो रोग भ्रष्टाचार , बेथिति , बिक्रिति हरू र सेटिङहरूको अन्त्ये हुदैन र समाजमा सुसासन कायम गर्न सकिदैन तब सम्म तपाईका विकास र संमृद्धीका नाराहरुको काम छैन तामाकोसीमा बगाईदिनुस ।जनताको ॲाखामा छारो हाल्न बन्द गर्नुस हामिलाई सडकको धुलो नै काफि छ ।”
खासमा राजनिति त निस्वार्थ देश ,समाज र जनताको सेवाकालागि गरीन्थ्यो तर आज राजनितिको दुरुपयोग गरेर कमाउने पेषा बनायर लुट माथि लुट मच्चायका छन । यहि हाम्रो दुर्भाग्य हो । तर अब हामि चुपचाप सहेर बस्नेवाला छैनौ ।